Shilpa Pokharel -- Chhabi Raj Ojha's Rekha Thapa replacement
Topic: Shilpa Pokharel -- Chhabi Raj Ojha's Rekha Thapa replacement
Author Topic: Shilpa Pokharel -- Chhabi Raj Ojha's Rekha Thapa replacement (Read 13081 times)
« on: February 17, 2015, 05:31:02 AM »
Chhabi Ojha once said Shilpa Pokharel is another Rekha Thapa of Nepali film industry.
Now it is clear he is working very hard to make it happen.
Shilpa's debut movie 'Lazza' becameasuccess.
Chhabi hasamaster plan to replace Rekha Thapa by Shilpa at the top position.
Chhabi Ojha has announced two sequel movies of the films originally of Rekha Thapa now featuring Shilpa Pokharel.
Kismat –2will feature Shilpa Pokharel in lead role.
Hit movie of Rekha Thapa
Hifajat2to directed by Gyanendra Deuja will also feature Shilpa.
Re: Shilpa Pokharel -- Chhabi Raj Ojha's Rekha Thapa replacement
« Reply #1 on: February 17, 2015, 06:09:04 AM »
छवि भन्छन् : ‘शिल्पा अभिनय भनेपछि मरिहत्ते गर्छिन्’
छवि ओझाले निर्माण गर्ने दुई फिल्म ‘किस्मत-२’ र ‘हिफाजत-२’ मा शिल्पा पोख्रेलले मुख्य भुमिका निर्वाह गर्ने भएकी छिन् । निर्माता ओझाको भनाई अनुसार शिल्पा अभिनयका लागि ज्यान दिन तयार छिन् । ‘शिल्पा अभिनय भनेपछि मरिहत्ते गर्छे, यस्तो मान्छेलाई नायिका बनाउनैपर्छ ।’ अनलाईनखबरसँग कुरा गर्दै ओझाले भने ।
छवि ओझाकै ब्यानरमा बनेको ‘लज्जा’ र ‘हवल्दार सुन्तली’मा शिल्पाले मुख्य भुमिका निर्वाह गरेकी छिन् । दुबै फिल्ममा शिल्पाको काम तारिफयोग्य भएको दाबी गरे ओझाले ।
नेपाली फिल्ममा नायिका हुनका लागि अभिनय, नृत्य र फाईटमा दम हुनुपर्छ । शिल्पामा यी तीनै गुण भएको पाएका छन् उनले । ‘नृत्य र अभिनय त राम्रो थियो । ‘हवल्दार सुन्तली’मा फाइट पनि निकै राम्रो गरिन् ।’ ओझाले शिल्पाको तारिफ गर्दै भने ।
कुनै पनि चलचित्रमा अनुबन्ध भएपछि त्यही चलचित्रमा केन्द्रित हुने बानी छ रे उनको । शिल्पालाई नजिकवाट चिनेका निर्माता ओझा भन्छन् ‘आफुले काम गर्ने चलचित्रको स्क्रिप्ट पढेर प्रत्येक दृष्यमा जीवन्त अभिनय गर्ने प्रयास गर्छिन् शिल्पा ।’
श्याम भट्टराईको निर्देशनमा बैशाख २ वाट ‘किस्मत’को सुटिङ हुने भएको छ भने ‘हिफाजत २’ को सुटिङ ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्देशनमा भदौमा हुनेछ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/02/241811/
« Reply #2 on: February 24, 2015, 12:51:09 AM »
चैत्र २७ गतेबाट प्रदर्शन हुन लागेको फिल्म 'हवल्दार सुन्तली'को 'घन्टी बज्यो...' बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा फिल्मका मुख्य कलाकार सविन श्रेष्ठ र शिल्पा पोख्रेललाई देखाइएको छ ।
शिल्पाको घन्टी बज्यो
छविराज प्रोडक्शनको ब्यानरमा छविराज ओझाले निर्माण गरेको यो फिल्मलाई ऋषि लामिछानेले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा किशोर खतिवडा पनि मुख्य भूमिकामा छन् ।
'घन्टी बज्यो...' बोलको गीतमा टंक बुढाथोकी र मिलन अमात्यको स्वर छ । यो गीतमा टंककै संगीत, दिनेश सुवेदीको शब्द छ ।
मदन काश्यप घिमिरेको छायांकन, कविराज गहतराजको नृत्य, अनन्त थपलियाको सम्पादन रहेको फिल्मले बलात्कारको शिकार भएकी सुन्तली धामीको कथालाई उठाएको छ ।
« Reply #3 on: February 25, 2015, 02:47:01 PM »
supriya-katuwal-model.jpg (599.81 kB, 1334x1639 - viewed 602 times.)
« Reply #4 on: March 17, 2015, 11:53:00 AM »
म पैसा कम दिन्छु तर उधारो राख्दिनः छवि ओझा
२० वटा चलचित्र निर्माण गरिसकेका निर्माता छविराज ओझालाई लाग्ने एउटा आरोप छ, उनले आफ्नो चलचित्रमा कलाकारलाई निकै कम पारिश्रमिक दिन्छन् ।
अनलाइनखबरको स्टूडियोमा कुरा गर्दै निर्माता ओझाले यो कुरालाई स्विकार गरेका छन् । छविले भने-‘यो कुरामा केही सत्यता र केही असत्यता छ । मैले पारिश्रमिक कम दिन्छु भन्ने सही हो, तर दिंदै दिन्न भन्ने होइन ।’
छविले आफूले सबै कलाकारसँग संझौता गरेरै काम गर्ने बताए । उनले भने-‘दिनेले कम दिउँ भन्ने खोज्छ, लिनेले धेरै लिउँ भन्ने खोज्छ ।’
उनले आफू एक व्यवसायी भएकाले पनि कम भन्दा कम रकममा सफल चलचित्र बनाउने बताए ।
उनले भने-‘म कलाकारलाई भन्छु कि मसँग पैसा छैन, यतीमा काम गर्नुपर्छ । मान्नेले गर्छन्, नमान्नेले गर्दैनन् ।’ आफूसँग सहमत नभएको खण्डमा अरु कलाकार लिने छविले बताए ।
खुलस्त बोल्न रुचाउने निर्माता ओझाले भने-‘आजसम्म मैले कुनै कलाकारलाई रकम दिन बाँकी छ भने मलाई देखाउनुहोस् । म कम दिन्छु तर उधारो राख्दिन ।’
« Reply #5 on: March 22, 2015, 01:09:18 PM »
Shilpa and Rajani
shilpa pokharel and rajani kc.jpg (76.37 kB, 630x836 - viewed 656 times.)
« Reply #6 on: March 30, 2015, 03:55:10 AM »
Female orientated person.
3 failed marriages .....
« Reply #7 on: April 22, 2015, 02:26:11 PM »
रेखाको स्थानमा पुग्लीन त ?
निर्माता छविराज ओझाले भित्राएका अभिनेता र अभिनेत्री दुबै फिल्म क्षेत्रमा हिट छन् । विशेषगरि, अभिनेत्री रेखा थापा र अभिनेता राजेश हमाल, अभिनेता आर्यन सिग्देल फिल्म क्षेत्रमा हिट देखिन्छन् । यसैले पनि छविराज ओझालाई फिल्म क्षेत्रमा 'बा' भनिन्छ ।
अभिनेत्री रेखा थापालाई 'हिरो' फिल्म मार्फत भित्राएका छविले १० बर्षसम्म उनीसँगै जिवन पनि बिताए । रेखा सुपरस्टार भइन्, छवि पनि हिट निर्माता । तर, रेखा सुपरस्टार भएसँगै अहिले छविसँग अलग छिन् ।
सुपरस्टार बनेपछि रेखा थापा छबिको जिवन र क्याम्पबाट टाढा गईन् । छविले नयाँ अभिनेत्रीको खोजी गरे जो रेखाको स्थानमा पुगोस् । उनले खोजेकी पहिली अभिनेत्री रजनी केसी खासै सफल हुन सकिनन् । यसपछि भने उनले फिल्म 'लज्जा' मार्फत शिल्पा पोख्रेललाई भित्राए ।
'लज्जा' हिट भएपछि छविको सपना पूरा गर्ने छनक देखाएकी शिल्पाको अहिले हाइहाइ छ । विशेषगरि, उनले अभिनय गरेको फिल्म 'हवल्दार सुन्तली'ले बम्पर ब्यापार गरेपछि शिल्पाका लागि छवि फापेका छन् । फिल्म क्षेत्रमा अब शिल्पा पनि रेखाकै लयमा लागिन् भन्ने भनाई सुनिन थालिएका छन् ।
विशेषगरि, एक्सन फिल्म 'हवल्दार सुन्तली'मा शिल्पाको अभिनयको तारिफ पनि खुबै भएको छ । शिल्पा छविको घोषित दुई फिल्ममा काम गर्ने पक्का भैसकेको छ । के छवि ओझाले भित्राएकी शिल्पा पोख्रेल रेखा थापाको स्थान लिन सफल होलिन् ?
शिल्पाको सफलताको कडीले यस्तै छनक देखाएको छ । फरक यत्ती छ रेखा गसिप र चर्चासँग डराउँदैनथिन्, शिल्पा यसमा अली नै बढी ध्यान दिने गर्छिन् । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अर्की रेखा थापाको रुपमा शिल्पा पोख्रेल जन्मिएको खण्डमा यसले फिल्म क्षेत्र र शिल्पा दुबैलाई फाइदा दिनेछ ।
« Reply #8 on: May 10, 2015, 06:10:45 AM »
Compare with Rekha's statement
« Reply #9 on: July 16, 2015, 11:52:55 PM »
पुरानो प्रेमीले धेरै सिकायो : नायिका शिल्पा पोखरेल
शिल्पा पोखरेल सानो पर्दाका दर्शकमाझ उहिल्यै परिचित अनुहार हो । एक समय आधुनिक गीतका म्युजिक भिडियोमा उनले एकछत्र राज गरेकी थिइन् । केही समयअघि मात्रै फिल्म ‘लज्जा’मार्फत ठूलो पर्दामा देखिइन् । चाँडै नै उनी अभिनीत अर्काे फिल्म ‘हवल्दार सुन्तली’ रिलिज हुँदैछ ।
शिल्पासँग दर्जन प्रश्नः
पहिलो फिल्मबाट आफ्ना केही कमजोरी ‘नोटिस’ गर्नुभयो त ?
ज्यानलाई केयरलेस गरेँ । मेन्टेन गरिनँ, चलिहाल्छ भनेर गर्दा मोटी देखिएछु । ‘लज्जा’ हेरेपछि मैले ‘हवल्दार सुन्तली’का लागि पूरै मेन्टेन गरेँ । फाइट क्लास लिएँ, जिम गएँ ।
नयाँ फिल्मका लागि कि फिट रहनका लागि ?
सेल्फ डिफेन्सका लागि भन्नुपर्ला ! त्यस्तो दिनका लागि पनि तयार भएर बस्नुप¥यो नि ! र, एक्सन मुभीको अफर आयो भने ‘गर्न सक्छु’ भन्ने भइरहनुपर्यो भनेर ।
तपाईंले फिल्ममा अभिनय गर्नुभन्दा केही महिनाअघि मात्रै फिल्म क्षेत्रमा कुनै हालतमा नआउने बताउनुभएको थियो, सम्झना छ ?
हो, अझै पनि सम्झिरहेकी छु । तपाईंसँग कुराकानी हुनुभन्दा केही समयअघि मात्रै मैले एउटा फिल्मका लागि अडिसन दिएकी थिएँ । छानिएँ पनि । त्यसपछि उक्त फिल्मका निर्देशकले भने, ‘नयाँ मान्छेलाई चान्स दिएबापत हामीले के पाउँछौँ ?’ मैले फिल्म छाडिदिएँ, सर्वस्व गुमाएर फिल्म खेल्नुपर्ने रहेछ जस्तो लागेर कहिल्यै फिल्म खेल्दिनँ भन्या’ थेँ । ती निर्देशकलाई त्यहीँ भन्या’ थेँ, ‘तपाईंजस्ता मान्छेका कारण नयाँ र राम्रा प्रतिभा फिल्म क्षेत्रमा आउँदैनन् ।’ तर, अभिनेत्री भइसकेपछि ठूलो पर्दामा देखिने सपना सबैलाई हुन्छ । पहिलोपल्ट नै मेरो त्यो सपनाको हत्या भयो ।
अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनेझैँ छविजीले पनि उस्तै प्रस्ताव गर्नुहोला भन्ने डर लागेन ?
एकचोटि त गलत सोच पनि आयो । उहाँले त्यतिबेला ‘लोफर’ फिल्म बनाउने तयारी गरिरहनुभएको थियो । मलाई उक्त फिल्ममा केटीको भूमिका कमजोर रहेको भन्दै ‘लज्जा’का लागि एक वर्ष कुर्न भन्नुभयो । मलाई उहाँले पनि झुलाउन खोज्नुभयो कि, जस्तो लाग्या’थ्यो । तर, जब उहाँले सही सल्लाह दिन थाल्नुभयो, त्यसपछि पूरै विश्वास जाग्यो । निर्देशक नवल नेपाल दाइले अडिसनमा स्क्रिप्ट र मेरो अभिनयमा मात्रै ध्यान दिएको देख्दा फिल्म क्षेत्रमा यस्ता राम्रा मान्छे पनि हुँदा रहेछन् भन्ने लागेर भावुक भएकी थिएँ ।
फिल्म क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पूरै बदलियो ? आफू नमरी स्वर्ग देखिँदैन भनिन्छ नि, त्यस्तै फिल्म क्षेत्रमा नआउञ्जेल सोचेका धेरै कुरा गलत भए । यो क्षेत्रका सबै मान्छेले शोषण गर्छन् भन्ने लाग्थ्यो तर केही गलत मान्छे हेरेर धेरैमाथि अन्यायी दृष्टिले हेरेकी रहिछु । यहाँका मान्छे मात्रै होइन, हामी आफैँ पनि खराब व्यवहारका लागि दोषी छौँ कि ? धेरै फिल्म खेल्न चाहने केटीहरूले ‘राम्रो ब्यानरको फिल्म खेल्न जे पनि गर्ने’ भनिदिँदा पनि यो अवस्था आएको हुनसक्छ । धेरै केटीले यस्तो भनेको मैले पनि सुनेकी छु । तर, त्यसरी फिल्म खेल्न पाइने रहेनछ, निरन्तर लागिरह्यो भने समय आउने रहेछ ।
केही समय त छविजीको कडा निगरानीमा रहनु पर्यो रे नि !
छवि बाले, कडा निगारानीमा राखेको होइन । मैले म्युजिक भिडियोमा लगातार काम गरिरहँदा फिल्म ‘लज्जा’का गीत पनि भिडियोजस्तै देखिएलान् भनेर म्युजिक भिडियो नखेल्ने बताएकी थिएँ । छवि बाले, कडा निगरानीमा राखेको कुरा आयो । त्यस्तो काँ’ हुन्छ हौ अनि ?
स्क्रिप्ट छान्ने जिम्मेवारी छविजीसँगै छ कि ?
फिल्म क्षेत्रका लागि उहाँ मेरो अभिभावक हो । उहाँले यही क्षेत्रमा २५ वर्ष बिताइसक्नुभएको छ । उहाँले मान्छे र स्क्रिप्ट दुवै चिन्नुहुन्छ । त्यसैले सल्लाह उहाँसँगै लिन्छु । उहाँ ‘निर्णय चाहिँ आफैँ गर’ भन्नुहुन्छ ।
तपाईंलाई छविजीले अर्की रेखा बनाउने रे !
रेखा दिदी सगरमाथा चढिसक्नुभयो । म त्यो बाटोमा छु, भन्नुभएको हो । त्यसकारण पनि उहाँले रेखा दिदीलाई मसँग तुलना गर्नुभएन, माथि नै राख्नुभएको छ । अर्काे कुरा रेखा दिदी रेखा दिदी नै हो । शिल्पा पनि शिल्पा नै बन्न चाहन्छु । भन्नुको अर्थ म आफ्नै एउटा स्पेस बनाउन चाहन्छु ।
गसिप मेकिङमा त पहिलो फिल्मबाटै अभ्यस्त भइयो है !
मलाई सुरु–सुरुमा त अप्ठ्यारो भयो । ‘रेखालाई रिप्लेस गर्ने रे, ‘हवल्दार सुन्तली’मा छवि बाले दोहोरायाउँदा बिहे गर्ने रे’ भन्ने हल्ला चले । केही नहुँदा बच्नुपर्ने कस्तो अचम्म भन्ने लाग्याथ्यो । मलाई पछि महसुस भयो । दर्शकले पोजेटिभ भन्दा नेगेटिभ कुरामा चासो दिने रहेछन् । यही बीचमा फिल्मका पब्लिसिटीका लागि फाइदा उठाइयो । ‘शिल्पा बिहे गर्न राजी हुन्छे भने हाम फाल्छु’ भनेर छवि बाले भन्नुभयो । मैले १० वर्ष कुर्नुहोस् भनेर चर्चा गर्ने मेलो बनाइदिएँ । कलाकार भएपछि पर्दाबाहिर पनि एक्टिङ गरेर हिँड्नुपर्ने रैछ । घरबाट निस्केदेखि एक्टिङ गरिरहेकी हुन्छु र घर नपुगुञ्जेल म शिल्पा हुन्नँ ।
फिल्म हिट भएपछि तारिफ गर्ने र पछि लाग्ने बढेका होलान् ?
फ्यान, फलोअर निकै बढेका छन् । दिमाग खराब गर्ने म्यासेज आएर हैरान छु । चिन्नु न जान्नु एकैचोटि ‘आई लभ यू’ रे !
एउटा न एउटालाई त ‘सेम टू यू’ पनि भन्नुपर्ला !
मलाई त ब्वाइफ्रेन्ड बनाए, करिअर टाढा हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले अहिले त्यो कुरा सोच्दिनँ ।
सानै उमेरमा भएको प्रेम अनुभवले यस्तै सिकायो ?
उसलाई पनि ‘थ्यांक यू’ भन्छु । त्यो सम्बन्धले समयमै धेरै कुरा सिकायो । अहिले कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्दा पनि पहिलाको सम्झेर रिस उठ्ने रहेछ । त्यसैले त्यस्तो अफर गर्नेलाई साथी भएर बस्दा राम्रो हुन्छ भन्छु ।
- नयाँ पेजबाट